Singer and Actor, Moe Moe's Family Photos | Myanmar Celebrity Couple Photos
Singer and Actor, Moe Moe's Family Photos
Moe Moe and Phyu Thi Myo Lwin got married last 8 months ago on April 21, 2009 at Sedona Hotel. Couple held their (100) days old son, Zay Linn Moe/ Nyein Zay Moe’s birthday party at Zayar Thake Hti Monastery, Yangon on December 15, 2009.
၂၀၀၉ ဧပြီလကမှ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော် မိုးမိုး နဲ့ ဖြူသီမျိုးလွင်တို့က အိမ်ထောင်သက် (၈) လ အတွင်းရခဲ့တဲ့ သားဦးလေး ဇေလင်းမိုး (သို့) ငြိမ်းစေမိုး ရဲ့ ရက် (၁၀၀) ပြည့်မွေးနေ့ အလှူကို ဒီဇင်ဘာ (၁၅) ရက်နေ့က ဇေယျာသိဒ္ဓိစာသင်ကျောင်းတိုက်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
AnonymousMarch 23, 2010 at 9:23 PMမိုးမိုးနဲ့သာ ကလေးကတူရင် နှာခေါင်းကြီကို ချွန်နေတော့မှာပဲReplyDeleteAnonymousMarch 27, 2010 at 7:44 AMကလေးလေးက တကယ်ကို ချစ်စရာလေး မိုးမိုးနဲ့ တူတယ်နော် ၊၊ တကယ့်ကို မိုးမိုးအသေးစားလေးReplyDeleteKoDecember 17, 2010 at 12:26 AMမြန်ထာ.... ဟိုတယောက်ထက်တောင် သာသွားပြီ .. ၅လ..၅လ..ReplyDeleteAdd commentLoad more...